Qalin Qorkii Yuusuf Garaad’ Iyo Sheeko Cajiiba Oo Ku Dhacday Gabadh Lagu Daray Maxaabiistii Itoobiye Ee Dagaalkii 77kii Iyo Gabadhaasi Waxay Ahayd | Marsa News
Qalin Qorkii Yuusuf Garaad’ Iyo Sheeko Cajiiba Oo Ku Dhacday Gabadh Lagu Daray Maxaabiistii Itoobiye Ee Dagaalkii 77kii Iyo Gabadhaasi Waxay Ahayd
March 7, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Gabar Soomaali ah ayaa ka mid ahayd maxaabbiistii ay Soomaaliya ku soo qabatay dagaalkii 1977kii dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia.
1988 ayay labada Dowladood ee Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku heshiiyeen qodobbo dhowr ah oo ay ka mid tahay in maxaabbiista dagaalka la sii daayo, la isna weydaarsado, ayaa xiligaa la soo daayay gabadha Soomaaliyada ah.
Markii la sii wareystay waxay ku adkeysatay in reerkoodu deggan yahay Beled Weyne ayna dooneyso in ay dib ugu laabato.
Ciidanka Asluubta sheekadoodu sidaas waa’ ay ka beddelnayd. Waxay yiraahdeen gabadha waxaa laga soo qabtay goobta dagaalka iyada oo tuute ku lebbisan bambaana sidata.
Dhinac waxaa iiga muuqata gabar miskiin ah in ay tahay. Mar waxaan arkay in su’aalaha qaar iyada oo aan ka fekerin ay markiiba jawaab deg deg ah soo tuureyso sida carruurta. Marna waxaan arkay in ay u muuqato qof adadag nolol noocyo kala duwan ahna khibrad u leh.
Waxaan u tegey saaxiibkeey aan ciyaal Buulo Burte isla ahayn Xasan Faarax, oo markaa ka tirsan Ururka Bisha Case ee Soomaaliyeed, Waxaan ka codsaday Xasan in uu ii raaco Beled Weyne oo ila goobo Mumina qoyskeeda.
Isaga iyo Bisha Cas labaduba way iga oggolaadeen soo jeedinta.
Mumina in aan xabsiga ka soo saaro wakhti ayay qaadan kartaa, inta waraaqaha aan sito la hubinayo, Taliyaha oggolaasho laga helayo, saxiix la iga qaadayo. Markaa ma dooneyn in howshaas aan qabto isla subaxa aan safarka u baxayno.
Hotelka waxaan la lahaa macaammil wanaagsan. Maamulaha Buraaqo Cabdullaahi, kana mid ah ardayda Jaamacadda, ayaan u digay oo aan u sheegay khatarta la iigu sheegay gabadha. Markaa qolka uu dejinayo ayaan isla eegnay. Haddii ay wax dhacaan sida uu iila soo xiriiri lahaana waan ku ballannay.